Maitiro Ekuramba Wakatarisisa Pane Zvinangwa Zvako: 9 Hapana Matipi Asingaite! - Blog
Maitiro Ekuramba Wakatarisisa Pane Zvinangwa Zvako
Kana zvikaita sekuti Hupenyu hunokuvhiringidza kubva pazvinangwa zvako mukana wese waunowana, makorokoto, maonero ako akaonekwa!
Zvese zvinhu kubva kubasa kuenda kumhuri kune hupenyu hwako hwerudo zvinoita kunge zvine hunyanzvi zvakagadzirwa kuti uchengetedze iwe kubva mukuzadzisa iyo Nirvana yekupedzisa zvibodzwa.
Kuva nemukana wekutarisa zvachose pachinangwa uye kutamira kwachiri chikomborero chisingaenzaniswi, uye chisingawanzoitika.
Kune vazhinji vedu, kusvika kune chinangwa mutambo wehopscotch, kwete sprint. Nekusvetuka kwese uye kunonoka kwehupenyu hwedu husina basa, hunoremedza hupenyu, isu hatigone sei kungoona zvinangwa, asi tichidzivirira kurasikirwa nekufarira mazviri?
1. Ziva Kuti Zvinangwa Hazvisi Zvakasarudzika Mapoinzi
Zvinangwa hazvichinjiki. Sezvineiwo, ivo vanofanirwa kuchinja patinochinja, uye nekukura patinokura.
Hapana chimwe chinhu muhupenyu hwedu - zvisinei nemabatiro atingatarisira - chakamira, saka pane pfungwa shoma kwazvo mukubata chinangwa kune yakasarudzika chiyero.
Kubvumira zvinangwa zvako kushanduka uye kukura zvinoita kuti zvive zvine simba uye kugadzikana .
Kugadzikana kunochengetedza chinangwa chikamu chehupenyu hwako, pane mureza wakaiswa mukongiri waunofanira kumhanya wakananga wakananga.
irand orton irikupi kubva
2. Gara Pamusoro
Hazvina mhosva chinangwa, zvikamu zvezvinhu zvakapoteredzwa zvichave zvapera. Imwe nzira yekugara wakatarisana nechinangwa kuramba uchizvidzidzisa nezvazvo.
Kune zvimwe zvinangwa, kudzidza kunosungirwa, senge kumutemo kana sainzi. Asi ko kana chinangwa chiri kuonda?
Zvichida dzidza pamusoro pemetabolism uye yakakosha physiology pane kukwikwidza kuburikidza nezviuru zve 'echimurenga' chikafu chinopihwa. Paunonyanya kujairana iwe nezviri pasi pe 'chassis' yako, zvirinani makanika iwe unenge uri kana yasvika nguva yekuishandira.
Zvimwe zvinangwa zvingangoda kuti iwe uzive kuti ndiani ari mundima yakasarudzwa mamiriro ekunze akafanana nemamwe matunhu (zvinangwa zvekufamba) izvo zvinodyarwa zvinowedzerana uye pazvinonyanya kudyarwa (permaculture) kana chimwewo chinhu semunhu uye chakakosha se maitiro aunoita kunetseka (hukama hwehukama).
Kuziva izvo zvaunofanira kuziva nezvekuti ungazadzise sei chinangwa chako kunokupa iwe pfungwa yemukati yekuti ungazosvika riini icho chinangwa, icho chinochengeta chinangwa chakadzika uye chitsva mupfungwa.
3. Fungidzira Mubairo
Nechinangwa chero chipi zvacho, pane chinangwa chakafanana. Kana icho chinangwa ndechekuve wakaverengerwa-kuverenga munyori wenhau, kuve nemari yezvemari uye nenguva yekuzvipira pachako kunyora zvinomhanya panguva imwe chete nechinangwa chakataurwa.
Kufungidzira chikamu chakafanana kunobatsira chinangwa kubva pakuva mubvunzo, basa risingafadzi.
Kana (zvakare, semuenzaniso) kurasikirwa uremu chiri chinangwa, usaedze kuzviona uri mutete. Zvione uchipedza nguva shoma uchipfeka zvebasa kana zvekunakidzwa usina kushamisika kana chimwe chinhu chakaringana.
Kunyangwe chinangwa chidiki senge kurongedza muyadhi zvinobatsira kubva pakuona. Usaone kurongedza se 'Zvakanaka, ndinenge ndatozviita.' Zvione sekusvika pakuzorora mune yakanaka, yakachena nzvimbo yekunze zvese zvako.
Isu tine inoda kuona kuti pane chikonzero chese basa ratinoita. Ndechipi chikonzero chiri nani pane kugadzirisa mamiriro e-o-u?
4. Dzivisa Goal Hopping
Mune dzakawanda zviitiko, tinorasikirwa nekutarisisa kwezvinangwa zvedu nekuda kwekudzokera shure. Dzimwe nguva, zvipingamupinyi izvi zvinoodza moyo zvekuti tinobva tangosiya chimwe chinangwa tobva tatarisana nechimwe.
Dambudziko apa nderekuti usambozadzisa chinangwa anova chinangwa.
Tinogona kusununguka kudana ichi hopping 'kufamba,' apo 'kunzvenga' izita raro rechokwadi.
Tarisa pane chinangwa nekuziva kuti zvichakuedza, uye iwe uchawanikwa uchishayikwa kupfuura zvaungangodaro wakasununguka nazvo, asi izvozvo zvakanaka. Chinangwa hachidi kukwana kubva kwauri, zvinoda kushingirira.
Saka nguva inotevera paunonzwa izwi riya remukati richiti iwe wanga usingade kuzviita zvakadaro uye nekukumanikidza kuti usvetuke, ripindure zvakapusa uye zvine simba, 'Hongu, ndadaro.'
Yekupedzisira Rondedzero Yemakumi mashanu Yega Yekuvandudza Yezvinangwa Kuisa Muhupenyu
Nei Uchifanira Kutanga Kugadza SMART Zvinangwa Muhupenyu
Yemahara Inodhindwa Chinangwa Kuisa Pepa Rokushandira + Habit Tracker Template
10 Mhando dzezvinangwa Kuti Ugadzire Iwe Muhupenyu (+ Mienzaniso)
Maitiro Ekumisikidza Mazuva Ese Zvinangwa Kuvandudza Hupenyu Hwako
5. Dudzira Chinangwa
Izvi zvinogona kuratidzika sezviri pachena, asi vangani vedu vanoti isu tine chinangwa mupfungwa kana chaizvo zvese zvatinazvo iri pfungwa isina kujeka yechimwe chinhu chatinoda kuti chiitike? Ruoko rwangu zvirokwazvo runokwira pamusoro peiyo.
nyowani zera vapambi vanobatana dx
Kutsanangura chinangwa kunotora kutsvagisa, zvinotora kutendeseka kuzviratidza , uye zvinotora nguva. Nguva yakakosha.
Kana isu tisingazvibvumire pachedu nyasha yenguva yakaringana kuti tizive chinangwa, isu tinoregedza chinzvimbo chedu nechinangwa icho kune chimwe chehukama hwakakundikana.
6. Danda raKaputeni
Kudhinda kunogona kuratidzika sezwi risinganzwisisike kubva kunguva yakapfuura, asi kana zvasvika pakuzvidavirira kune chinangwa chemunhu, zvakaoma kurova zano iri rakaedzwa-uye-rechokwadi.
Kuchengeta bhuku yekuedza, kufambira mberi, uye zvipingamupinyi zvinokunda zvinokweretesa chinangwa cheepic-ness, uye ndiani asingade kufunga nezve chinangwa chakasvika paepiki, chinhu chinoshamisa chakakodzera kuratidzwa uye rwiyo?
Haitombofaniri kunge iri yemagazini yezuva nezuva, asi inofanira kunge iri yejenari yenguva dzose: chinangwa ndechekupa rondedzero yakadzikama kune zvaunoita, izvo zvinogutsurira kuva dzikama mukuedza kwako chaiko-kwenyika. Kuzvidavirira, kuzvidavirira, kuzvidavirira!
Iyo inogona kuve yakadzika, ingo-iyo-chokwadi accounting inogona kuve inonakidza imwe. Izvo zvakakwana kusvika kune zvaunofunga. Asi kuti ive inokurudzira, inofanirwa kuve yechokwadi uye yenguva dzose.
7. Tora Mabhureki
Tarisa zvakanaka. Tarisa kune kubviswa kwezvimwe zvese hakuna kunaka, zvine njodzi munzira dzakawanda uye bhuku rese rekubatsira rinenge richingokwenya pamusoro.
Enda kure ne 'chinangwa' chekunakidzwa, kubuda mubazi, kuita pfungwa nemagariro mhasuru, kana kungo wedzera kufema kukuru kwekuzorora.
Pane musiyano pakati pechinangwa nekushushikana. Pfupi vhezheni: zvibodzwa hazviite kuti iwe urasirwe nemudiwa wako obsessions do.
8. Zvipe wega Rwiyo
Mimhanzi inokurudzira. Nguva. Ini handina basa nechinangwa chako, ndinovimbisa kuti pane mimhanzi yekuitsigira.
Tsvaga uyu mumhanzi. Gadzira runyorwa.
Kana iwe uchinzwa kutarisisa kwako kuchidzikira kana zviitiko zvichirangana kuizunza, buritsa yako Playlist O 'Kufuridzirwa.
Jam kune ino yekutamba. Mhepo-gitare semwari kune iyi playlist. Wobva waunganidza zvako kuyedza, gadzirisazve, uye gadziridza yako chinangwa kumashure munzira yayo yakatarwa.
Unoda kurudziro diki kuti utange? Buda nziyo idzi .
9. Iva Munhu Chaiye
Kutarisa pachinangwa harisi basa hombe kana isu tichinyatso kuziva kuti icho chinangwa ndechei.
Kujekesa chinhu chinoshamisa muzvinhu zvese zvehupenyu, uye kana tichiziva zvinangwa zvedu, mabhenefiti ekuzvizadzisa, uye nei tichida kana kuda mabhenefiti pakutanga, zvinangwa zvinomira kuve zvibodzwa uye, panzvimbo pezvo, mazuva ese nzira yehupenyu, iyo inoderedza matani ekumanikidza.
Ndingati vazhinji vedu tine zvakakwana zvakakwana kumanikidza kubata.
Saka kana chinangwa chako chiri chekuita zvinhu zvese, nenzira dzose ita kudaro… chero iwe uchirangarira unofanirwa kutarisa pazviri chimwe nechimwe.
zvinorevei kana mukomana achikudaidza kuti unodakadza
maitiro ekumuregeredza kuti awane pfungwa dzake
nhetembo yekurasikirwa nemunhu waunoda
uye ndiri kudanana newe
kuziva sei mukomana wekusarudza